အကျဉ်းသားသူခိုးများ: အချင်းစေတန် ငါ့နောက်ထံသို့--ဆုတ်လော့
နားဂစ်ဖြစ်တော့ ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီတဲ့ငွေတွေ၊ပစ္စည်းတွေကို ဘိုကလေးကဗိုလ်ဗှူး အောင်တိုးလင်းတို့အဖွဲ့
ဘုံးပြီးရောင်းစားကြသည်။ သိတ်ကြာကြာမခံ။ ဗိုလ်ဗှူးအောင်တိုးလင်းမိန်းမကလေးမွေးတော့ ကလေးကပါးစပ်တခြမ်းရွှဲ့နေသည်။ လက်ကလေးတွေတိုနေသည်။ လူတွေကဘုရားရိုက်သည်ဆိုကြ၏။ နယ်စပ်မှာလည်းဘုရားရိုက်မဲ့သူတွေဒုနဲ့ဒေး။ သူခိုးကြီးငတက်ပြားကတော့စိတ်ညစ်နေသည်။
ငါတုံးက ခိုးပြီးဆင်းရဲသားတွေကိုလှူသည်။ ဒီငနဲတွေက ခိုးပြီးသားပစ္စည်းသူတို့အိပ်ထောင်ထဲကမထွက်တော့။
နော်ဖေါရေတယောက်ဗဒင်သီချင်းကိုဆိုပြီးအပျော်ကြီးပျော်နေသည်။ လူရှင်းနေသည့်အခါ စကပ်ကိုဝတ်ပြီး၊ မိတ်ကပ်ဗလပွလူး၊ ကာရိုအိုကေမိုက်ကိုခဲနေသောသူ့ပုံစံက အပေါစားမိန်းမစိတ်မနှံ့သည့်ပုံမျိုး။
တခါတလေ ရက်ပ်သီချင်းကိုပြောင်းပြီး ခွကြားကိုနှိုက်ခါ
“ဗမာတွေကိုမုန်း--- ဒေါက်တာနဲ့လုံး-- တို့တမျိုးလုံးချမ်းသာပေါ့ တပြုံးပြုံး--
စာသင်ကျောင်းကတဖြည်းဖြည်ကြီးလာပြီ။ ကျောင်းသားလေးတွေကငတ်နေသည်။ ငတ်နေတာတွေကိုပြပြီး နော်ဖေါရေတယောက်ချမ်းသာလာခဲ့လေပြီ။
မေး--- နော်ဖေါရေ က နာမည်ကြီးနေတယ်နော်- ဗမာကျောင်းသားတွေဆိုကျောင်းလက်မခံဘူးဆို
နော်--- ဗမာတွေကို မုန်းတာဘုရားသခင်အလိုတော်ပေါ့နော်-- တို့ဘုရားသခင်က---ကရင်လေ
မေး--- ဟာ ဒါအသစ်ပဲ( မိုက်ကိုရှေ့တိုးစေ) ဘုရားသခင်ကကရင်ဆိုတာအခုမှပဲ။ ကြားဘူးတော့တယ်။
နော်-- အံမယ်--ဖိုးခွားကမယုံဘူးလားဝှေ့- လောင်းကြေးစားကြေးလုပ်မယ်ဆိုရင်မန်းမန်းကိုခေါ်လိုက်ရမလား။
သူက ဘော်လုံးပွဲတင်မကဘူး။ ဘုရားသခင်ကရင်ဟုတ်မဟုတ်လည်းလောင်းတယ်။
ဒို့--ကိုးကွယ်တဲ့ကရင်ဘုရားသခင်က ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်နားကပ်ပြီး ခိုးတဲ့။ ဟောခဲ့တာ။ အောင်နိုင်ခြင်း ၁၄း ၁ မှာဖတ်ပေါ့
မေး-- ဟာဒီလောက်မဟုတ်တယုတ်လုပ်ခိုင်းနေတာ ဘုရားသခင်ဟုတ်နိုင်ပါ့မလား- တော်ကြာခင်ဗျားယောင်္ကျား ရုပ်ထုထုပြီးမုတ်ဆိတ်တတ်ထားတာဖြစ်နေပါအုံးမယ်။
နော်-- ဖိုးခွားကလည်းတော်တော်တုံးတယ်ဝှေ့-- ဒို့ပြောတဲ့ဘုရားသခင်ဆိုတာ ငါးတက်ပြား ကိုပြောတာ။
(သူခိုးငါးတက်ပြား သေရွာမှထလာကာ သူ့မှာ နော်ဖေါရေ၏အကျင့်စာရိတ္တလုံးဝမရှိကြောင်း
မေး--- ထူးထူးလေးမိန်းမ မနီလွိုင်ဒုက္ခသည်စခန်းကိုရောက်တော့ကျောင်းသားတွေ ကဆီးပြီးပါးရိုက်
တယ်ကြားတယ်။ အဲ့ဒီကောင်မက ဗမာဒုက္ခသည်တွေတင်တဲ့လျှောက်လွှာတွေဆိုပယ်ချတာကိုး။ နော်ဖေါရေးကဗမာကျောင်းသားတွေလျှောက်တဲ့လျှောက်လွှာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ ထူးထူးလေးမိန်းမ
နော်--- ကွယ်---ကြောက်နိုင်ရိုးလား။ ဒို့ကအကုသိုလ်နင်းပွဲအမြဲလုပ်တယ်။
နော်---အကုသိုလ်နင်းပွဲဆိုတာ--ကရင်ဝါးညှပ်အကနဲ့တွဲလုပ်ရတာကွဲ့။ ခိုးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာနဲ့ရွတ်၊
“ဘုရားသခင်သည်ကရင်ဖြစ်၏။ ခိုးခြင်းကိုအားပေးလော့” ဆိုတဲ့ဂါထာကိုရွတ်ရတယ်ကွဲ့။ မန်းမန်းကတော့လောင်းကြေးနိုင်စေသားဆိုပြီး ဝါးလုံးကိုရွှေ့ပေးရတယ်ကွဲ့
အေဒီ ၂၀၀၀ ကျော်ရင် “နော်ဖေါရေ ”ဆိုသော ကရင်သူခိုးမ နှင့် မိန်းမပျက်များ ထိုင်းနယ်စပ်မှာပေါ်လတ္တံ ၊သောင်းကျန်းအံ့ဆိုတာလေ။
အပုတ်နံ့များ ဆွတ်ဖြန်းစေ။ စားပြီးသားကွမ်းသွေးများဖြင့်နော်ဖေါရေ မျက်နှာပေါ်လူအများထွေးစေ။
အောင်မလေး--ဒေါက်တာစင်သီယာမောင်ရဲ့--ခင်ဗျားက မာသာထွီဇာ တော--့မာသာထွီဇာပဲ။
ဒါပေမဲ့မျက်စိမှုန်-- နားလေးနေတဲ့ မာသာထွီဇာ--- ပတ်ဝန်းကျင်လေးလည်းလှည့်လို့ကြည့်ပါအုံး။
ဘုရားသခင်သည်ကရင်မဟုတ်ဆိုသောစတိတ်မန့် ကမ္ဘာလောကကြီးအားကြေငြာပါတော့မည်။ တူဝေဝေ----
Posted by သူခိုးများ at 4:59 PM
Hsa Thoo said...
I am so happy with you because you are the one who is very perfect in everything and you have never made any mistakes.
How much did you get paid to gossip?
ဘယ်အဖွဲ့ လည်းဆိုတာ မသိချင်ပေမဲ့။။။ဘာကြောင့် ဒီလိုအတင်းအဖျင်းတွေ လျောက်ရေးနေလဲဆိုတာ နားမလည်ဘူး၊
ဖြစ်နိုင်ရင် တစိတ်လောက်မေးပါရစေ။။ ဘိုကြည်ဆိုတဲ့လူကို ချွတ်ဖို့ အတွက် ဒီဘလောဂ်ဖွင့်သလားမှတ်တယ်။။
ဖြစ်နိုင်ရင်။။ဘိုကြည်ဆိုတဲ့လူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဖြေရှင်းရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။။ ဒီလိုလျောက်ရေးတာထက်စာရင်ပေါ့။။
Thwee Wor said...
It's so nice to read your artificial articles. I would like to know the composer names. Then only I can nominate you to give the heroic prize. I would like to request you to write more articles. As you are the prisoners, you will not be afraid to accept God's punishment. In addition, I would like to wish you to have successful lives in the prison.
Note: It's like coward writing articles without writing names or by gossiping here.
U N H C R ရုံးမှာရော မယ်တော်ဆေးခန်းမှာရော
ခြုံလှန်ပြီး ချီးပါတဲ့ ကရင်မတွေချည်းဘဲ။
ဒါတောင် K N U ငတုံးတွေ အင်အားသိပ်မရှိတောလို့ ။
မဟုတ်ရင် ကရင်မတွေ ဖင်လှန်ပြီး ဒုံးယိမ်းကနေမလားဘဲနော်..။
၀က် ဘ် ဆိုက်ဖွင့် စာရေးတာ ခွေးကအစ တက်တာကို အားလုံး သဘောပေါက်ကြပါ။
ရှုးရှူး ရှူး ကိုချစ်ဆိုတဲ့ ကတုံးလေးနဲ့ခွေးလေး သွားသွား သွား ခြုံထဲမှာ ကရင်မတွေရဲ့ ချီးတွေ ရှိတယ်
မာဂ မာဂ အို့ အို့ ကိုချစ်နဲ့လုမစားနဲ့မယ်တော်ဆေးခန်းနောက်က လယ်ကွင်းတွေထဲမှာ အများကြီး ရှိတယ် နှစ်ကောင်လုစားရင်တော့ နှုတ်သီးအရိုက်ခံရမယ် ဟော ပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ ကျော်ကြီးက ချီးကားကြီး မောင်းလာပြီ မင်းတို့ အတွက် မကျန်အောင် သိမ်းကျုံးသယ်သွားတော့မယ်။မြန် မြန် စား မြန် မြန် စား
နနိသေန(ခ) ဆန်ဒ ။ပညာဝံသ တို့နှစ်ဦးပေါင်းပြီး ဘုန်းကြီးတွေ လူတွေမကောင်းကြောင်းတွေ ရေးမနေကြနဲ့ တော့ကွာ။မင်းတို့ရေးတာတွေ လူမိထားပြီးပြီ မဟုတ်လား။ အမေရိကန်မှာ အဆင်မပြေလို့လူဝတ်လဲလိုက် ဘုန်းကြီးလုပ်လိုက်
အနှိပ်ခန်းသွားလိုက် လုပ်နေတဲ့ မင်းတို့ ပုံတွေ အင်တာ
စနေကျော် စသဖြင့် နံမည်မျိုးစုံတပ်ပြီး လုပ်နေတဲ့
ဘုန်းကြီးအတုတွေ မင်းတို့ ၂ဦး အရက်မူးပြီး သောက်တင်း ပြောနေတဲ့ အသံတွေကိုပါ ဖွင့်ချပေးရမလား။ ရွေဝါရောင် အမည်ခံပြီး လူလိမ်လုပ်နေတာ ဖာသည်ဖင်လို့ ပါစပ်ကပြောနေတာ တကယ်လှုပ်ရှားလာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေအတွက် နစ်နာလိုက်တာ
ထွန်းအောင်ရေ မင်းကကော ကတုံးတုံးထားတဲ့ခွေးတကောင်ပဲလား။ဒါမှမဟုတ် လူလိမ်၂ကောင်ထဲက တကောင်လားကွ။မင်းချီးမစားထားဘူးဆိုရင် စဉ်းစားပြီးယုံပေါ့ကွာ။သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုမှာ
တကယ်ပါလာတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေကို ပညာဝံသနဲ့ နံနိသေနဆိုတဲ့ခွေး၂ကောင် ရေးချင်တာရေးတုန်းက မင်းက သူတို့နဲ့ အတူ ချီးသွားစားနေတယ်နဲ့ တူတယ်
မမြင်ရင် ရှေ့ မှာရေးထားတာတွေ ပြန်ဖတ်ကြည့်အုန်း
လူလို တတ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ ။
သိသွားပြီ မင်းက ကတုံးနဲ့ ခွေးပဲ မင်းတို့နှစ်ကောင်
ဘာဆိုတာ မကြာခင်မှာ သိစေရမယ်။ချီးကြိုက်တဲ့
ခွေးကတုံးတွေဆိုတော့ ချီးစားပြိးတော့ စောင့်နေ။
ဘိုင် ဘိုင် ဘိုင်
လုပ်မနေနဲ့ အုန်း မင်းတို့နဲ့ လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ မိန်းမ
တွေက ရောဂါတွေ နဲ့ ။ဘန်ကောက်က မိန်းမက သူကို မ
မခေါ်ဘူးဆိုရင် ပညာဝံသနဲ့ လိင်ဆက်ဆံနေတဲ့ ပုံ ထုတ်
ုပြမယ်တဲ့။ဆန်ဒ(ခ) နနိသေနကတော့ ဗမာပြည်မှာ
သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့ မိန်းမက အမေရိကကို အမြန်ခေါ်
ပါတဲ့ ။မခေါ်ရင် ဖုန်းထဲမှာ အီထားတဲ့ အသံတွေ အင်တာနက်မှာ၇ှိုးလိုက်မယ်တဲ့။ သတိထား။သတိထား
လူလိမ်ဘုန်းကြီးများ။မင်းတို့ လို့ ဖာခေါင်းတွေကို ပတ်စပို့ ထုတ်ပြီးပေးခဲ့တဲ့ နအဖကို လည်းအကြွေးဆပ်
လိုက်အုန်း။ သိန်းထောင်ချီ မကုန်ပဲ အမေ၇ိကန်ရောက်အောင် လုပ်ပေးခဲ့ တဲ့ ကျေးဇူးရှိတယ်မဟုတ်လား။
တချို့သော တော်လှန်ရေးသမားတွေရဲ့ သားမယားတွေမှာ ရွှေတွေဆင်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ တချို့ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် တပ်မှူးလေးတွေမှာ ရွှေဆွဲကြိုး ဆွဲထားတာတောင်တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ချမ်းသာ နေတယ်ဆိုတာကို ဝင့်ဝါပြတဲ့သဘောပါ။ တချို့အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တွေဆိုရင် ကားကြီး ကားငယ်တွေတောင် ပိုင်ထားကြတယ်လို့ တိုးတိုးတ်ိတ်တိတ်ရော အတိအလင်းပါကြားရပါတယ်။ တချို့ဆိုရင်လည်း တောထဲတောင်ထဲမှာတောင် အိမ်ကြီးရခိုင်တွေနဲ့ ရှေးခေတ် နယ်စားပယ်စားကြီးတွေလို ခန်းနားကြီးကျယ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်ပုံ ပိုင် ဆိုင်နည်း သဏ္ဌာန်တွေကတော့ စုံလို့ပါဘဲ။ "ပြောလည်းမပြောတတ်ပါပြီ” လို့ဆိုရလောက်အောင် ထွေပြားလှပါတယ်။(from khitpyaing.org)
စားပေါက်ကတော့ အမျိုးမျိုးပဲနော်။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်တုန်းလည်း Open School Campaign ဆိုပြီး ဒေါ်လာသန်းချီတဲ့ ရရှိတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ခဲ့တယ်။ နော်ဝေးတနိုင်ငံတည်းက
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီအော် တော်တော် တော်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလား။ နေ ကရိုနာ သန်း ၂၀ လောက် ရရှိခဲ့တယ်။ အဲဒီတုန်းကလည်း ကျော်ကျော် နိုင်အောင် ခင်မောင်ဝင်းတို.က ဦးဆောင်တယ်။ ဒေါက်တာသောင်းထွန်းကတို.က နောက်က ပံ့ပိုးပေးတယ်။ ဗကသများအဖွဲချုပ် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီနှင့် အတူ Open School လှုပ်ရှားမှုကို လုပ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး အဝေမတဲ့လို. မဲဆောက်မှာ ရှိတဲ့ ဗကသများအဖွဲ.ချုပ် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီရုံးမှာ ကွန်ပြူတာကို ယူသူက ယူ တခြား ပစ္စည်းကို စွဲသူက စွဲဆိုပြီးအချင်းချင်း အဝေမတည့်လို. ရရာကို ယူပြီး အမွေခွဲသလိုဖြစ်ခဲ့တာ အားလုံး မှတ်မိနေကြမှာပါ။ကဲ အခု လာပြန်ပြီ။ လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးတဲ့။ ကြားရရင်တော့ နတ်လူ သာဓု ခေါ်ရမည့်ကိစ္စ။ အကြောင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ထောင်ထဲမှာ အဖမ်းခံရသူတွေကို သနားမိသလို။ စာလည်း စာနာမိပါတယ်။ လွတ်လည်း လွတ်စေချင်ပါတယ်။နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မလွတ်တော့မသိဘူး။ ဒီလှုပ်ရှားမှုအတွက်ကို အကြောင်းပြပြီး လုပ်စားဖို.အတွက် ဂွင်တခုကတော့ ကျော်ကျော်တို. နိုင်အောင်တို. ခင်ဥမ္မာတို. လက်ဦးမှု ရရှိလိုက်တာပဲ။ ဒီတခါတော့ဗကသများအဖွဲ.ချုပ် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ၏အပိုင်နယ်မြေမဟုတ်တော့ဘူး။ မောင်မောင်တိတ်တို.. ဘိုကြည်တို. စားချက်ဖြစ်သွားတယ်။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမဟုတ်လား။ ဆရာကြီးကျော်ကျော်တို. နိုင်အောင်တို..ကတော့ ထုံးစံတိုင်းပဲ။ စားကွက်ထွင်ရာမှာတော့ စံပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် တော်လှန်ရေး လုပ်နေပါတယ်လို. ပြောရင်းနှင့်ပဲ ကားကောင်းကောင်းကြီးတွေ စီး။ အိမ်ကောင်းကောင်းကြီးတွေမှာနေ။ မက်ဆီကိုက ဘိန်းဘုရင် Drug Cartels တွေလိုပဲ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလိုဖြင့် ဗိုလ်စံစံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဇိမ်ခံနေတာ။ ဒါကြောင့် ကျော်ကျော်တို. နိုင်အောင်တို. ခင်မောင်ဝင်းတို. ခင်ဥမ္မာတို. လုပ်တဲ့ နိုင်ငံရေး တော်လှန်ရေးကို လုပ်ချင်လို. အားကျနေတဲ့သူတွေလည်း ဒုနဲ.ဒေးရှိနေတယ်။ သွားရည်ယိုသူတွေ အများသားပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ စီးပွားရေး လုပ်ရင်တောင် သေချာပေါက် ကြီးပွား မကြီးပွားက မသေချာဘူး။ နောက် ဟိုလူဖား ဒီလူဖားနှင့် လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ အခုတော့ တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင် ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် လူအခွင့်ရေးခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေလည်း ရရှိသေးတယ် မျက်နှာပန်းလည်း လှတယ်။ နောက် ငွေလည်း အချောင်ရတယ်။ နိုင်ငံတကာနှင့် သွားချင်ရာလည်း အခမဲ့ ခရီးသွားခွင့်ရရှိတယ်။ ဒီတော့ ဒီလို တော်လှန်ရေးမျိုး အလုပ်မျိုး နှစ်ရှည်လရှည်ဖြစ်စေချင်တာ ဘာ ဆန်းမလဲ။စောစောစီးစီး ပွဲပြီးသွားရင် ဒုက္ခရောက်ရချီရဲ့။ ကိုယ်ကျိုးနည်းရချီရဲ.။ တကယ် ခံနေရသူတွေကတော့ အထဲကလူတွေပဲ။ သနားစရာ ကောင်းတယ်လို. ပြောရမလား။ မဟုတ်ရင်လည်း ဒီလောက် အသုံးမကျရလားအ လှ ချီလားဆိုပြီး ဒေါသ ထွက်ရမလား။ သူများတွေ လုပ်စားခွင့် ဂွင်ရအောင် စားခွက်ရအောင် ကိုယ့်ဘ၀တွေ မိသားစုဘ၀တွေကို စတေးပြီး အထဲမှာ စွပ်အတင်း လုပ်နေတာ။စစ်တပ်ကို စိမ်ခေါ်နေကြရှာတာ။ သနားပါတယ်နော်။ ဒီလို လုပ်လေ တိုင်းပြည်တော့ ဘာမှ ဖြစ်မလာသလို သူတို.ဘ၀တွေလည်း ပျက်။ တကယ် အမြတ်ထွက်သူတွေကတော့ NDD က ကျော်ကျော် နိုင်အောင် ခင်ဥမ္မာနှင့် DVB က ခင်မောင်ဝင်းတို. NCGUB က သောင်းထွန်းတို.ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတခါ No Vote 2010 Election တော. ဈေးကွက်မ၀င် ဈေးကွက်မမြင်လို.လားမသိ ရှောင်နေတယ် လူ အ လေးတွေလို။Campaign လုပ်စားသူ ဆန်.ကျင်ရေးတပ်ဦး ( Political Marketing Group)
ဂန်ဘာရီကို ဒဏ္ဍာရီလုပ်ပစ်မယ့် ဘိုကြည်
စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်အပြိုင်တိုင်းပြည်ကိုမွဲပြာသွားအောင် ခိုးပါတော့မည်။ကျနော်တို့သည်ထောင်ထဲမှာနှစ်ရှည်ကျနေ သောကျောင်းသားများကိုပြစားပါမည်။ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် တိုင်းရင်းသားကောင်မလေးများကိုစကော်လာဆုများနှင့်မျှားကာချစ်ခွငိ့်ပန်ဖို့ကြိုးစားပါမည်။ အနှစ်(၂၀) မှာကျနော်တို့ချမ်းသာနေကြပါပြီ။ ကျနော်တို့၏အဓိကဇာတ်လိုက်ကျော်များမှာ ခါးပိုက်နှိုက်လိုလို၊ ဖဲဝိုင်းမှာအကောက်ကောက်သောကောင်လိုလိုဥပဓိရုပ်ရှိသော ဘိုကြည်။ ဗမာပြည်မှာဘီအီးကိုနပ်မှန်အောင်မသောက်ရသော်လည်း၊ ပြည်ပမှာအကောင်းစား အရက်များသောက်ပြီး ဖာရုံမှာခေါက်ဆွဲကြော်ကြော်သောအဆီပြန်မျက်နှာနှင့် အာလေးလျှာလေးဖြစ်နေသောတရုတ် ငတိတ် တို့ဖြစ်လေ၏။